IMartech iboniswe kwi-bizMagazini yeeNtengiso | Martech Zone
IMartech iboniswe kwiBizMarketing Magazine
NgoLwesibini, Oktobha 9, 2012 NgoLwesibini, Oktobha 9, 2012 Douglas Karr
Ukuba ufumana ithuba, bhalisela ukubhaliselwa bizUmagazini weNtengiso. Kutshanje baphinde bapapashe inqaku lethu malunga nokukhula kunye nekamva le Ezentlalo. Kwakumnandi ukusibona kupapasho, kwaye imagazini yedijithali yayipakishwe ngamanqaku amnandi kunye nengcebiso ngetoni.
I-bizMarketing Magazine inikezela ngamashishini akwi-Intanethi kunye noochwephesha bezentengiso ngeendlela ezahlukeneyo zamanqaku ezinto ezisemgangathweni ezenzelwe ukukugcina unolwazi lwamva nje kwihlabathi eliguqukayo lokuthengisa kwi-Intanethi. Inkupho nganye yenyanga ibandakanya ukukhethwa kweminye imixholo ebalaseleyo efumaneka kwi-Intanethi, kunye namanqaku awodwa abhalelwe abafundi bethu kuphela.
tags: kumakishwaipad ukupapashwaimagaziniimagazini yentengiso
Inkqubo yeNtengiso ye-Lifecycle yokuThengisa